देउवा सरकार बनाउन मेनरोल खेलेका माधब नेपालमाथि देउवाले नै यसरी खोले ब्याक फायर, अब गठबन्धनको के हुन्छ ? – GALAXY
देउवा सरकार बनाउन मेनरोल खेलेका माधब नेपालमाथि देउवाले नै यसरी खोले ब्याक फायर, अब गठबन्धनको के हुन्छ ?
वर्तमान शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्नका लागि मेनरोल खेल्ने एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधब नेपालले धोका पाउने भएका छन् । नेपालले प्रदेश १ र बागमति प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँने र स्वागत गर्न तयार रहनु भन्दै बिभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएका थिए । देउवाले गठबन्धन नै धरापमा पर्नेगरी माधव नेपाललाई ब्याक फायर गरेका हुन् ।
तर प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले बाग्मती प्रदेशमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भएको छ। यसको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस बाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई अघि बढ्न भनेका छन् । आजमात्रै बानियाँले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बाग्मतीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसको लागि बानियाँलाई अघि बढ्न भनेका छन् । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा भने बाग्मतीमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।
उता, गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि बाग्मतीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरिरहेको छ । यसको लागि राजेन्द्र पाण्डेको नाम मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएको छ। अहिले बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा छिन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शाक्यलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी अल्पमतमा परेकी हुन् । मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ अघि सरे नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले पनि उनलाई नै सहयोग गर्ने बुझिएको छ । यसबारेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच भद्र सहमतिसमेत भएको जनाईन्छ ।